DHEGEYSO-Musuq-maasuqa doorashada labada aqal oo gaarey heerkii ugu sarreeyey. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Musuq-maasuqa doorashada labada aqal oo gaarey heerkii ugu sarreeyey.
Diseembar 3, 2016 8:58 g 0
Muqdisho, Dec 04 2016-Musuq-maasuqa iyo wax isdaba marinta hanaanka doorashada Soomaaliya, gaar ahaan doorashada labada aqal ee barlamaanka ayaa gaarey heerkii ugu sarreeyey, iyadoona ay marxaladaan siweyn u dhaliilayaan siyaasiyiin kala duwan.
Abu-kaate Caydiid Ilka-xanaf, gudoomiyihii hore ee maxkamadda ahna musharax u taagan kurasaasta aqalka sare, ayaa sheegay in sifo aan sharci ahayn looga saaray liiska musarixiinta aqalka sare ee Soomaaliland.
Madaxweyne Siilaanyo oo wax ka bedel ku sameeyey xukuumaddiisa.